Kedu ka esi tinye akwaazụ azụ dị mma na ngalaba gị?
Ka anyị malite na njedebe nke njikarịcha search engine. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ebe nrụọrụ weebụ gị SEO, ị ga-ahụkwa maka ịgbakwunye redlinks na saịtị gị. Enweghi ike ịhọrọ isiokwu kwesịrị ekwesị na saịtị gị, mepụta ọdịnaya bara uru ma mejuputa atumatu zuru okè. Ịkwesịrị ịgbalị ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị anya na nsonaazụ ọchụchọ n'etiti ọtụtụ nde mmadụ ndị ọzọ niche metụtara ngalaba. Ụzọ kacha mma ị ga - esi mee ka ndị ọrụ gị mara nke ọma bụ ịmepụta mgbasa ozi njikọta gburugburu ya. N'isiokwu a, anyị ga-atụle uru nke backlinks na weebụsaịtị na ụfọdụ dị mkpa ka esi wuo njikọ ndị dị ike dị n'èzí maka SEO.
Olee otú backlinks nwere ike isi nyere gị SEO?
Backlinks nwere mmetụta dị ịrịba ama na saịtị gị dịka Google nyochaa ikike saịtị gị site n'aka ha. Ọ dị oké mkpa maka ịchọta engines ịchọpụta ihe ndị ọzọ na-eche gbasara ika gị. Ozi a na-enyere ha aka ịlele azụmahịa gị nke ọma ma nye ya ọkwa.
Na nso nso a, webmasters gbalịsiri ike inwekwu backlinks na ebe nrụọrụ weebụ ha ka ọ nwere ike ịmezi visibilụ azụmahịa na netwọk na SERP. Otú ọ dị, ọ dịghị mma, Google kpebiri ịgbanwe ọkwa ya algorithm. Ya mere, n'oge a, naanị weebụsaịtị ndị nwere njikọ dị mma nke na-ezo aka na ha, nwere ohere iji bulie elu na nsonaazụ ọchụchọ Google. Ụdị dị elu, ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa na-egosi na saịtị gị, ohere kachasị mma nke ịkwalite ọkwa ọkwa ọkwa Google. Dịka iwu, ngalaba ochie nwere ọtụtụ backlinks na oge ma ọ bụrụ na ha nwere ụfọdụ àgwà maka ndị mmadụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbalite usoro nke agbakwunye àgwà backlinks gị na saịtị, malite ịkparịta ụka n'Ịntanet iji wuo njikọ na backlinks.
Olee esi chọpụta àgwà azụlinks?
N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị niile backlinks e kere hà. Ụfọdụ n'ime ha nwedịrị ike ibibi ọkwa gị ma mee ka ị nweta nyocha search engine ma ndị ọzọ agaghị enye gị uru ọ bụla. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ịmara ọdịiche dị n'etiti njikọ spam na njikọ njikọ dị mma.
E nwere ụfọdụ njirisi ị ga-ebu n'uche iji tụlee àgwà njikọ ndị ọzọ:
Google nwere mmasị na weebụsaịtị ndị nwere ntụkwasị obi. Backlinks sitere na saịtị ndị dị otú ahụ ga-aba uru karịa site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ ndị ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, ụdị ebe nrụọrụ weebụ dịka Forbes, Huffington Post, BBC, na ndị ọzọ ga-ewetara gị ọtụtụ uru dịka azụmahịa, ahịa, na ego. Mgbe ị na-eweghachite backlinks site na ebe nrụọrụ weebụ ndị a nwere ike ịbụ ọrụ dị mgbagwoju anya, ọ ga-atụnye uru dị ukwuu na ogo gị na data okporo ụzọ.
Ihe ọzọ dị mkpa ịkwesịrị ịṅa ntị bụ mkpa nke ebe nrụọrụ weebụ ị na-eme njikọ. Google nyochaa otu isiokwu nke isi na-ejikọta gị. Ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa maka ụlọ ọrụ azụmahịa gị, Google na-adọta ya ka ọ ghara inweta ya. Ọzọkwa, ịtụkwasị njikọ na ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa ga-ewetara gị uru dịka n'ebe ahụ ị nwere ike ịmepụta ndị ahịa gị.
PageRank bụ algọridim Google ji mee ihe iji wepụta ebe nrụọrụ weebụ gị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ. Ị nwere ike ịlele weebụsaịtị PageRank iji Semalt Website Analyzer ma ọ bụ ndị ọzọ ọkachamara ngwá ọrụ nwere ike inye gị ikike website metrics. Lezienụ anya n'eziokwu na saịtị niile na-amalite na efu. Ọ bụ ya mere ị ga-eji chee echiche ihe dị iche iche Source .